I-LTN Global yanika amandla imveliso esebenzisana kwi-2020 yeDemokhrasi yeSizwe | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Ukuhanjiswa kokuqukethwe » I-LTN Global yanika amandla imveliso esebenzisana kwi-2020 yeDemokhrasi yeSizwe
I-ColUMBIA, Md. - Agasti 21, 2020 - I-LTN® Global, inkokeli yecandelo kwitekhnoloji yeendaba eguqukayo kunye nezisombululo zenethiwekhi zothutho yayiliqabane elisemthethweni lokusebenzisana kwiDemocratic National Convention (DNC), ebibanjelwe kule veki eMilwaukee, eWisccin.
Njengomlingani osemthethweni onxibelelanayo osemthethweni, izisombululo ze-LTN zazisetyenziselwa ukudibanisa abathathi-nxaxheba abatyeleli kumava evidiyo ashukumisayo. Isiganeko esibonakalayo senza ukuba abathathi-nxaxheba bahlangane ngawona maxesha anzima kwimbali yaseMelika.
INdibano yesiZwe yeDemokhrasi yabona abathunywa beDemocratic Party bonyula ngokusemthethweni uJoe Biden noKamla Harris njengabagqatswa kunyulo luka-2020 lwaseMelika.
Ividiyo yeVidiyo yeLive's Cloud (i-LVC) inike amandla ukuba kuthathwe yonke imijelo ebukhoma kubathathi-nxaxheba kwilizwe liphela ngaphambi kokuba isasazwe kwizikrini ezinkulu ze-LED nakwimveliso esemoyeni yejelo elisebenzisa imithombo yeendaba yoluntu. I-LVC sisixhobo esiphezulu sokulawula imithombo yeendaba kwi-PDN Command. Ngenye yeetekhnoloji ezingundoqo i-DNC esetyenzisiweyo ukwenza i-2020 Convention eyahlukileyo, enamandla kunye nokuzibandakanya.
Itekhnoloji ye-LTN Global yasenza ukuba sikwazi ukubandakanya ukusabela kwabaphulaphuli, nangona singakwazi ukuhlangana buqu, utshilo u-Andrew Binns, iGosa eliyiNtloko eliSebenzayo, iKomiti yeNgqungquthela ye-2020 yeDemokhrasi. “Ukuphatha imveliso ebonakalayo kuthetha ukuba singabandakanyeka siphile nabantu abaninzi abasenokungakwazi ukuza kwindibano ngokobuqu. Sikwakwazi ukubandakanya abantu abaninzi kulo lonke ilizwe kwisigameko esingumqobo.
I-LVC ibonelele nge-DNC ngokufumana okungapheliyo kwevidiyo, indlela yokuhamba, kunye namandla okuhambisa. Ngokudibanisa amandla efini, i-LVC inike amandla ababoneleli kude kunye nababukeli badityaniswe ngaphandle komthungo ukwenza amava okuba yinxalenye yomsitho obukhoma.
"Kwiimeko zomngeni zomntu wonke, i-PDN ivumele iiDemocrat ukuba zizise indibano yazo kubathathi-nxaxheba, abathathi-nxaxheba kunye nabaphulaphuli okunamandla kunanini na ngaphambili," utshilo uMalik Khan, uSihlalo oLawulayo we-LTN kunye noMseki weNqkubo. "Isebenzisa izisombululo ezinamandla zophando zeLPN, i-DNC ibeke phambili ikamva leziganeko nokuba zeziphi na iifomathi, umxholo okanye indawo."
Previous: U-WRIGHT UYAJOYELA I-GRAVITY MEDIA NJENGENtLOKO YEMVELISO NOMXHOLO KUNYE NOMvelisi OGQWESILEYO
next: I-VFX iLegion, Inkampani eyiPioneering Remote, iqala ngo-Full Scale BC Division ngeZakhono ezandisiweyo